(src)="1.1"> בסוריה הפכנו כולנו לרוצחים
(trg)="1.1"> ဆီးရီးယားတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး လူသတ်သမားတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ
(src)="2.3"> צילום : כאראם אל-מצרי , זכויות יוצרים Demotix ( 27 .
(trg)="2.2"> သုသာန်နေရာ မလောက်ခြင်းကြောင့် အလက်ပိုမြို့နေများဟာ သေဆုံးသူများကို မြို့တွင်းတလျှောက် ပန်းခြံများနှင့် မြေနေရာလွတ်များတွင် မြှုပ်နှံနေကြရသည် ။
(src)="3.1"> ביום רגיל לחלוטין , בעוד אני סועדת ארוחת צהרים עם חבר בטורקיה , הרחק מהמולת ההפצצות והמוות , כמעט חנוקה מאשמה על שהרחקתי מעירי ואני נהנית ממותרות כמו חשמל ושירותי תקשורת בעת שחלב גוססת , פתחתי - מכורה לרשתות חברתיות שכמותי - את עמוד הפייסבוק שלי .
(trg)="3.2"> အလက်ပိုမြို့ သေအံ့ဆဲဆဲဖြစ်နေချိန်မှာ ကျွန်ုပ်မှာတော့ လျှပ်စစ်မီး နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သော စည်းစိမ်များကို ခံစားရင်း မွေးရပ်မြို့ နှင့် အဝေးတစ်နေရာသို့ ရောက်နေရခြင်းအပေါ် စိတ်မသန့်ခြင်းများဖြင့် မွန်းကြပ်မှုကို ခံစားနေရသလိုရှိနေခိုက် ကျွန်ုပ်သည် ဖေ့ ( စ ) ဘုတ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိ ၏ ။
(src)="3.3"> לשון ההודעה : " מרסל , המחסום בסבע בהראת אינו קיים עוד .
(trg)="3.4"> စာထဲတွင် “ သူငယ်ချင်းရေ ဆဘာဘားရတ်မှာရှိတဲ့ လုံခြုံရေး စစ်ဆေးရေးစခန်း မရှိတော့ဘူး ။
(src)="3.4"> הוא נחרב היום בהפצצות .
(trg)="3.5"> ဒီနေ့ ဗုံးကြဲတဲ့အထဲ ပါသွားပြီ ။
(src)="3.5"> אני יודע עד כמה זה משמעותי עבורך .
(trg)="3.6"> ဒီဟာက မင်းအတွက် အရမ်း အရေးပါတာကို ငါသိပါတယ် ။
(src)="3.6"> אני מקווה ש חיל האוויר הוא הבא בתור .
(trg)="3.7"> နောက်တစ်ခေါက်ဟာ လေတပ် ( အဆောက်အအုံ ) ဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ ။
(src)="4.1"> החבר הזה מכיר אותי מצוין .
(trg)="4.1"> သူသည် ကျွန်ုပ် အကြောင်းကို အလွန်သိသော သူငယ်ချင်းဖြစ် ၏ ။
(src)="4.2"> הוא יודע עד כמה אני שונאת שמוסיפים לשמי את האות ' אליף ' בערבית , ומקפיד לאיית אותו נכון .
(trg)="4.3"> လက်ရှိဖြစ်နေသည့် တော်လှန်ရေးနှင့် ပက်သက်တာကြောင့် တစ်ခုတည်းတင်မကပဲ ဒီ စစ်ဆေးရေးစခန်းဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် အထူးသဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မည်မျှ အရေးပါသည်ကိုလည်း သူသိသည် ။
(src)="4.4"> הוא היה איתי כשהבאנו לקבורה את אמי , שנרצחה בדם קר על ידי כוחות הביטחון במחסום הזה ממש .
(trg)="4.4"> ဒီ စစ်ဆေးရေးစခန်းမှာ လုံခြုံရေးတွေ သွေးအေးစွာ သတ်လို့ သေဆုံးသွားတဲ့ ကျွန်ုပ် မိခင် ၏ ဇာပန အခမ်းအနားမှာလည်း သူရှိနေခဲ့ပါသည် ။
(src)="4.5"> הוא גם ידע שאבין את כאבו שלו , כשהזכיר את בניין חיל האוויר הידוע לשמצה , שמפגינים הובאו אליו , עונו ונרצחו .
(trg)="4.5"> သူ့အတွက်နှင့်လည်း ဆန္ဒပြသူတွေကို နှိပ်စက်ပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ဒီ နာမည်ဆိုး လေတပ် အဆောက်အအုံကြီး အကြောင်းကို သူပြောပြလာတဲ့အခါ သူ ၏ နာကျင်မှုတွေကို ကျွန်ုပ် နားလည်မည်ဆိုတာကို သူသိ ၏ ။
(src)="4.6"> והוא ידע שאבין מדוע הוא מייחל לכך שהבניין הזה יופצץ .
(trg)="4.6"> ပြီးတော့ ဒီအဆောက်အအုံကို ဗုံးကြဲစေဖို့ သူမျှော်လင့်တာကို ကျွန်ုပ် ဘာကြောင့် နားလည်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သူသိလေသည် ။
(src)="5.3"> למעשה , מה שהרגשתי היתה קהות חושים תהומית .
(trg)="5.3"> အတိအကျ မည်သို့ ခံစားလိုက်ရသည်ကို အပြည့်အ၀ နားမလည်ပါ ။
(src)="6.1"> אני רוצה לספר לכם על הערכים שגדלתי עליהם בבית .
(trg)="6.1"> ကျွန်ုပ် ၏ မိသားစုအတွင်း ကျွန်ုပ်အား ပြုစုပျိုးထောင်လာသော အတွေးအခေါ်အချို့ကို ပြောပြပါရစေ ။
(src)="6.2"> גדלתי במשפחה נוצרית שמרנית , וחונכתי להאמין שרק אהבה יכולה למחוק את כאבה של האנושות בעולם שהשנאה השתלטה עליו .
(trg)="6.3"> ကျွန်ုပ်သည် အမုန်းတရားများ ဖုံးလွှမ်းထားသော ကမ္ဘာကြီးတွင် လူသားများ ၏ နာကျင်မှုကို မေတ္တာတရားတစ်ခုတည်းနှင့် ဖြေဖျက်နိုင်သည်ဟု ဆုံးမမှုကို ခံယူခဲ့သည် ။
(src)="6.3"> האמנתי שהחיים - של כל אחד , יהא אשר יהא - הם מקודשים ועומדים מעל לכל .
(trg)="7.1"> လူ့အသက်တိုင်းသည် — မည်သူကပင် ပိုင်ဆိုင်နေစေကာမှု — မုချ မြင့်မြတ်ပါသည်ဟု ကျွန်ုပ် ယုံကြည်ပါသည် ။
(src)="6.4"> התנגדתי להפלות , למלחמה , לעונש מוות .
(trg)="9.1"> သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ် ကျရှုံးခဲ့ပါသည် ။
(src)="7.2"> מי הם ?
(trg)="9.3"> သူတို့က ဘယ်သူတွေလဲ ။
(src)="7.3"> מה מעשיהם בחיים ?
(trg)="9.4"> သူတို့ ဘာလုပ်လဲ ။
(src)="7.4"> מאילו משפחות הגיעו ?
(trg)="9.5"> သူတို့ ဘယ်မိသားစုကလာတာလဲ ။
(src)="7.5"> לאיזה פלג הם משתייכים ?
(trg)="9.6"> သူတို့ ဘယ် ဂိုဏ်းမှာ ပါတာလဲ ။
(src)="7.6"> הצלחתי לשחד מישהו שימסור לי את המידע הזה .
(trg)="9.8"> ပြီးနောက် အဲ့ဒီ စာရွက်ကလေးကို အကြာကြီး သိမ်းထားမိသည် ။
(src)="7.7"> את דף הנייר הזה שמרתי עמי זמן רב , ורק כשחשתי חזקה מספיק - השמדתי אותו .
(trg)="9.9"> နောက်တော့ ခွန်အားပြည့်ဝလာတဲ့ တစ်ချိန်မှာ အဲ့ဒါကို ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါသည် ။
(src)="8.1"> היה ביכולתי למסור את שמותיהם לחבריי , לוחמים בצבא סוריה החופשית , והם היו מפיצים את המידע ודואגים לכך שהרוצחים יבואו על עונשם .
(trg)="10.1"> ကျွန်ုပ်သည် ဆီးရီးယား လွတ်မြောက်ရေး တပ် ( Free Syria Army ) မှ သူငယ်ချင်း လက်နက်ကိုင်များကို ထို အချက်အလက်များကို လွှဲပေးနိုင်မည့် အခြေအနေထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည် ။
(src)="8.3"> עצם הרעיון של כוח כזה מעורר בי חלחלה .
(trg)="10.5"> ထိုကဲ့သို့သော စွမ်းအားများ ရှိခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်ကို ကြောက်လန့်စေပါတယ် ။
(src)="9.1"> ובכל זאת , בכל שבוע שבתי וחיפשתי אותם .
(trg)="11.8"> သူတို့ အလုပ်ချိန် နှစ်ဆိုင်း ခွဲလုပ်သည် ။
(src)="9.2"> עמדתי מרחוק והבטתי בהם .
(trg)="12.2"> ချိုချို စိမ့်စိမ့်လေးပေါ့ ။
(src)="10.3"> האם ידעה אישתו שהוא ירה באמי ?
(trg)="12.4"> ထို အမျိုးသမီးကိုတော့ ကျွန်ုပ် အသေအချာ ခန့်မှန်း ၍ မရပါ ။
(src)="10.4"> או , ליתר דיוק , רצח אותה ?
(trg)="13.1"> နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်သဘောပေါက်လာခဲ့ပါသည် ။
(src)="10.5"> בשלב זה הבחנתי שאיני מצליחה להיזכר באמי מבלי להיזכר גם בהם .
(trg)="13.2"> သူတို့ကို သတိမရပဲနှင့် ကျွန်ုပ် မိခင်ကို သတိမရနိုင်တော့မှန်း သိလာခဲ့ပါသည် ။
(src)="10.6"> פניהם של הרוצחים החלו להחליף בראשי את חיוכה ושערה .
(trg)="13.4"> ရင်ထဲမှ ကလဲ့စားချေချင်သော အသံဟာ မိခင် ကျွန်ပ်အား သင်ပေးခဲ့သမျှထက် ပိုမိုကြီးမားနေသည် ။
(src)="10.8"> ביום ההוא גמלה בי ההחלטה להפסיק לחשוב עליהם .
(trg)="13.5"> ယင်းသည် မိခင် ၏ ရယ်သံထက်ပင် ကျယ်လောင်နေတော့သည် ။
(src)="11.1"> איני נוטרת להם עוד , אך איני מסוגלת למחול להם .
(trg)="14.2"> သို့သော် သူတို့ကို ခွင့်တော့မလွှတ်နိုင်ပါ ။
(src)="11.2"> אני תקועה בנקודה שבין כאב , נקמה ומחילה .
(trg)="14.4"> လက်စားချေလိုမှု နှင့် ခွင့်လွှတ်မှုတို့ အကြားတွင် ထွက်ပေါက်ပိတ်နေသည် ။
(src)="11.3"> איני יכולה להכיר בכך - אף שהדבר עשוי להיות נכון בהחלט - שגם הם עצמם אולי קרבנות של משטר אסד , שהוא זה שהפך אותם לרוצחים .
(trg)="14.5"> သူတို့ဟာလည်း အာဆတ် ( Assad ) အစိုးရစနစ် ၏ သားကောင်များ ဖြစ်ရကာ လူသတ်သမားများအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတာ ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုတာဟာ မှန်နေသည့်တိုင်အောင် အသိအမှတ် မပြုပေးနိုင်ပါ ။
(src)="11.4"> בבית המשפט בסוריה מתנהלת תביעה בעניין רצח אמי , וקיוויתי שאוכל אותה לבטל עם נפילת המשטר , כאות מחילה , כיוון שאני מאמינה שזו תהיה הדרך להשיב את השלום לסוריה .
(trg)="14.6"> ဒီအရာဟာ ဆီးရီးယား တရားရုံးမှာ ကျွန်ုပ်တို့အကြား ဖြေရှင်းရမည့် အမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အာဆတ် အစိုးရစနစ် ကျဆုံးသွားခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ် သူတို့ကို ခွင့်လွတ်တဲ့ အနေဖြင့် အမှုကို ရိတ်သိမ်းဖို့ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပါသည် ။
(src)="12.1"> מסיבה זו , הפצצת המחסום הזה על ידי החזית האסלאמית לפני ימים אחדים היתה עבורי כמו סטירת לחי .
(trg)="15.1"> ဒါကြောင့် ဒီ စစ်ဆေးရေး စခန်းကို အစ္စလမ်မစ် ရှေ့ပြေးတပ် ( Islamic Front ) က ဗုံးကြဲသွားသည်ဆိုသော သတင်းဟာ မျက်နှာကို ရိုက်လိုက်သလိုပါပဲ ။
(src)="12.2"> האם אני שמחה שהם מתו ?
(trg)="15.2"> သူတို့ သေသွားပြီ ဆိုတာကို ကျွန်ုပ် ပျော်ရမလား ။
(src)="12.3"> האם באמת השתניתי עד כדי כך , שאוכל לשמוח על מותם של אחרים ?
(trg)="15.3"> သူတပါး သေဆုံးခြင်းမှ ကျွန်ုပ် ၏ ပျော်ရွင်မှုကို ရရှိနိုင်သော သူတစ်ဦး အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီလား ။
(src)="12.4"> האם איבדתי את הפריווילגיה למחול להם בבוא היום ?
(trg)="15.4"> သူတို့ကို ခွင့်လွှတ်ပေးမည့် သူတစ်ဦးဖြစ်ရမည့် အခွင့်ထူးကို ကျွန်ုပ် ဆုံးရှုံသွားပြီလား ။
(src)="12.6"> האם השתלטה המלחמה על נפשי באופן מוחלט ?
(trg)="15.6"> စစ်ပွဲဟာ ကျွန်ုပ် ၏ ဝိဉာဏ်ကို လုံး၀ ညစ်ညမ်းစေခဲ့ လေလား ။
(src)="13.2"> ואני מבינה כיצד ערכם של כל הדברים מתפוגג כשנאלצים להתמודד עם מוות יום ביומו .
(trg)="16.3"> နေ့စဉ်နှင့် အမျှ သေဆုံးမှုနှင့် ဆက်ဆံရသည့်အခါ အရာရာတိုင်းဟာ တန်ဖိုးများ မည်ကဲ့သို့ ပျောက်ဆုံးသွားသည် ဆိုတာကို နားလည်သည် ။
(src)="13.3"> אני יודעת כיצד הצורך להסתגל למציאות יכול גם להביא אותך לרחוש כבוד למוות יותר מאשר לחיים .
(trg)="16.4"> ထိုအခြေအနေကို ကျင့်သားရအောင် လေ့ကျင့်နေရခြင်းသည် အသက်ထက် သေဆုံးခြင်းကို ပိုကြည်ညိုလာစေသည် ဆိုတာကိုလည်း နားလည်သည် ။
(src)="14.3"> או שמא היו אלה חפים מפשע , שרק במקרה היו במקום הלא-נכון בזמן הלא-נכון ?
(trg)="17.8"> အပြစ်မဲ့သူများအား ဆုံးရှုံးမှုအတွက် ဝမ်းနည်းမှု ခံစားနိုင်ရန် ကျွန်ုပ် ကျိုးစားသော်လည်း အငိုက်မိနေရသည် ။
(src)="14.4"> איני מחפשת נקמה , אך בתוך הכאב שלי על חפים מפשע וחברים לדרך , אין ביכולתי לכאוב על מחסום , על מוסדות ממשל , או על רוצחים .
(trg)="17.9"> ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် အဖြေတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်ုပ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်သော်လည်း အသတ်ခံရသော လူသတ်သမားများအတွက်တော့ ဝမ်းနည်းမှုကို ခံစားရန် မတတ်နိုင်တော့ပါ ။
(src)="15.1"> ליום הולדתי השנה קיבלתי אקדח קטן מחבר שדאג לי , חסרת הגנה בארץ שכולם חמושים בה .
(trg)="18.2"> လက်နက်တစ်ခုဟာ ချစ်ခင်မှု ၏ သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု မည်သူက တွေးမိလေမလဲ ။
(src)="15.2"> מי היה מעלה בדעתו שכלי נשק יוכל לשמש סמל לאהבה ?
(trg)="18.3"> သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်သည် သားကောင်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ရခြင်းအပေါ် ဝမ်းနည်းမိပါသည် ။
(src)="15.3"> אבל אני עצובה על כך שהפכתי לקרבן פעמיים .
(trg)="18.4"> ပထမအကြိမ်က ကျွန်ုပ် မိခင်အား ဆုံးရှုံရသည့်အချိန် ၊
(src)="15.4"> בפעם הראשונה , כשאבדה לי אמי ; בפעם השנייה , כשאבד לי מעמד הקרבן .
(trg)="18.5"> ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သားကောင် ဖြစ်မှ ဆုံးရှုံးသွားသည့်အချိန် ဖြစ်သည် ။
(src)="16.1"> יכולת ההישרדות שלי תלויה במותם של אחרים .
(trg)="18.7"> ပြီးတော့ အခြားသူများ သတ်ခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ် ကျေနပ်မှု ခံစားခဲ့ရဖူး ၏ ။
(src)="16.2"> אני מנסה לחיות עם הרעיון הזה ולהשתמש בו בתור תירוץ : " כדי שאחיה , הוא חייב למות " .
(trg)="19.2"> ယင်းမှာ “ ကျွန်ုပ်ရှင်သန်ဖို့ သူသေရမယ် ” ဆိုသော အကြောင်းပြချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ပြီး နေထိုင်ရန် ကျွန်ုပ် ကျိုးစားခဲ့သော အတွေးဖြစ်သည် ။
(src)="16.3"> וכך ינצח בסופו של דבר המשטר הרצחני הזה , יהא אשר יהא עתידה הפוליטי של סוריה .
(trg)="19.3"> ဆီးရီးယားအတွက် မည်သည့် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ စောင့်မျှော်နေစေကာမှု ဤပုံစံနှင့် လူသတ် အစိုးရစနစ်ကြီးသည် အဆုံးစွန်တွင် အနိုင်ရရှိမည် ဖြစ်သည် ။
(src)="16.4"> המשטר הצליח להפוך את כולנו לרוצחים .
(trg)="19.4"> အစိုးရ စနစ်ဆိုးဟာ ကျွန်ုပ်တို့အား လူသတ်သမားများအဖြစ်သို့ အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည် ။
(src)="17.2"> com ומצייצת תחת הכינוי Marcellita @ , בעיקר בערבית .
(trg)="20.2"> com တွင် ဘလော့ ( ခ် ) ရေးသားပြီး @ Marcellita တွင် twitter သုံးပါသည် ။